144 000 (isa) - Wikipedia
144 000 (isa)
Ny isa 144 000 dia isa manana ny lajany manokana eo amin' ny fivavahana maro. Ho an' ny Kristiana dia manana lanja ara-panoharana io isa io. Hita ao amin' ny Apôkalipsin' i Joany (toko faha-7) io isa io izay manondro ny isan' ny olom-boafidy.
1 Ao amin' ny kristianisma
1.1 Ao amin' ny Testamenta Vaovao
1.2 Hevitry ny isa 144 000
1.2.1 Fivoasana ara-bakiteny
1.2.2 Araka ny Vavolombelon' i Jehovah
Ao amin' ny Testamenta VaovaoHanova
Ao amin' ny Apôkalipsin' i Joany, toko faha-7, no ahitana ny firesahana momba ny isa 144 000:
1 Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indreo, nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazan-tany efatra, nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy nisy rivotra hitsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza. 2 Ary hitako fa, indro, nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona; ary iry niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe: 3 Aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase eo anin'ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitsika. 4 Ary nahare ny isan'izay voaisy tombo-kase aho: efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy no voaisy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny Zanak'isiraely rehetra. 5 Avy tamin'ny firenen'i Joda roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase. Avy tamin'ny firenen'i Robena roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Gada roa arivo amby iray alina. 6 Avy tamin'ny firenen'i Asera roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Naftaly roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Manase roa arivo amby iray alina. 7 Avy tamin'ny firenen'i Simeona roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Levy roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'Isakara roa arivo amby iray alina. 8 Avy tamin'ny firenen'i Zebolona roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Josefa roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Benjamina roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase.
Hevitry ny isa 144 000Hanova
Ny Prîtestanta sasany (indrindra ireo mampianatra ny premilenarisma sy ny dispensasionalisma) dia mivaofy ara-bakiteny ny isa 144 000 ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy. Ho azy ireo dia tsy misy zavatra manambara ao fa adika amin' ny heviny am-panoharana io isa io. Ireo olona miisa 144 000 ireo dia Jiosy izay tsy nanao firaisana tamim-behivavy sady tsy misy zavatra hanomezan-tsiny azy ary ho hita eny amin' ny handrin' izy ireo ny anaran' ny Tompo sy ny anaran' ny Ray (Apô. 7.1-8; 14.1-5). Ka ireo Jiosy ireo no hitory ny Filazantsaran' ny Fanjakana mandritra ny fahoriana lehibe. Henjehin' ilay Antikristy sy ny fitondram-panjakany izy ireo sady holaviny.
Araka ny Vavolombelon' i JehovahHanova
Araka ny fivoasan' ny Vavolombelon' i Jehovah dia "Jiosy ara-panahy" na "Isiraely ara-panahy" ireo olona miisa 144 000 ireo, izany hoe ireo "voahosotra" ao amin' ny fikambanan' ny Vavolombelona. Mino ny Vavolombelona fa ireo 144 000 (ara-bakiteny) ireo fotsiny no hahazo ny fiainana mandrakizay any an-danitra amin' ny maha mpanjaka sy mpisorona eo akaikin' i Jesoa Kristy azy ireo. Mielanelana ny fotoana hisafidianan' Andriamanitra ireo olona ireo ao anaty fe-potoana maharitra taonjato roapolo, hatramin' ny nirotsahan' ny fanahy masina tamin' ny andro Pentekôstan'ny taona 33 hatramin' izao. Talohan' ny taona 2007 dia voalaza fa nitsahatra tamin' ny taona 1935 izany antso ho an' ny fiainana any an-danitra izany, fa taorian' io dia tsy nisy daty voatondro intsony. Nihevitra ny Vavolombelon' i Jehovah, araka ny fahazoany izay voalaza ao amin 'ny Taratasy voalohany ho an' ny Kôrintiana (1Kôr. 15.21-23), fa ny isan' ireo voahosotra dia akaikin' ny tratra tamin' ny lohataon' ny 1914, izany hoe tamin' ny fanombohan' ny "fanatrehan' i Jesosy", ka ireo izay natory tao amin' ny fahafatesana dia natsangana tamin' ny maty ho lasa zavaboary ara-panahy. Ireo izay maty hatramin' io daty io dia hatsangana amin' ny maty eo no ho eo ho amin' ny fiainana tsy manam-pahataperana any an-danitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=144_000_(isa)&oldid=1013410"
Dernière modification le 4 Aogositra 2021, à 10:50
Voaova farany tamin'ny 4 Aogositra 2021 amin'ny 10:50 ity pejy ity.